Ntuziaka njem nleta Canada | Otu Di na Nwunye
Ndị America na-aga Europe, mgbe ụfọdụ, ha chefuru Canada dị nso. Ndị chọrọ ịma mma nke Alps nwere ike ịchekwa penny ma ọ bụ abụọ site na ịga na Rockies Canada. Ndị na-achọ ile obi ụtọ na Paris nwere ike ịchọta na ọ na-adịghị mma mgbe ha risịrị nri dị ukwuu na Canada na-asụ asụsụ Mecca Montreal.
Canada mara mma. Ndị mmadụ dị mma. Ihe oriri ahụ dị mma. Ihe ọṅụṅụ ndị dị ike. Kedu ihe ọzọ ị chọrọ?
Ụlọ Nzukọ Alaeze
asụsụ: N'ụzọ Bekee, ọ bụ ezie na a na-asụ French n'ozuzu obodo Quebec ma ruo n'obere na Ontario. Ịkwesighi ịmara French ka ị gafee na Quebec, mana ị ga-amara na ọtụtụ ederede n'okporo ámá dị n'obodo ukwu ndị dị ka Montreal na edere French.
Ego: Dollar Canada (CAD). CAD bụ 1.3 maka 1 USD ugbu a. Ụfọdụ ebe dị na Canada na-enweta USD, karịsịa ndị na-eru nso n'ókè nke United States, Otú ọ dị, ị ga-eme mgbanwe na obere obere na nnukwu denominations maka CAD.
Ike Ike: Na Canada, a na-eji bọọdụ ike nke ụdị A na B. Ụdị voltage ọkọlọtọ bụ 120 V na ụdị ọkọlọtọ bụ 60 Hz.
Gụkwuo Banyere Canada!
Ndo, anyi enweghi ike ichoputa ihe obula. Biko nwalee nyocha dị iche.